Trano famakiam-boky: Inona izany? Ary Maninona no tsy mahomby ny paikadim-barotra amin'ny atiny raha tsy misy izany | Martech Zone
Taona maro lasa izay dia niara-niasa tamin'ny orinasa iray izahay izay nanana lahatsoratra an-tapitrisany navoaka tao amin'ny tranonkalany. Ny olana dia vitsy ny lahatsoratra novakiana, na dia kely aza ny laharana amin'ny motera fikarohana, ary latsaky ny iray isan-jato amin'izy ireo no manana fidiram-bola omena azy ireo.
Manome fanamby anao aho handinika ny tranombokin'ny atiny anao manokana. Mino aho fa ho gaga ianao amin'ny hoe ny isan-jaton'ny pejinao no tena malaza sy ampiarahin'ny mpihaino anao, tsy lazaina intsony izay pejy mitana ny motera fikarohana. Hitanay matetika fa ny mpanjifanay vaovao dia miorina amin'ny teny marika ihany, ary nandany ora an'arivony tamin'ny atiny izay tsy misy mamaky.
Ity mpanjifa manokana ity dia nanana mpiasan'ny editorial feno miaraka amin'ny mpamoaka lahatsoratra sy mpanoratra… saingy tsy nanana paikady ifotony izy ireo inona manoratra. Nanoratra fotsiny momba ny lahatsoratra hitany fa mahaliana izy ireo. Nikaroka momba ny atiny izahay ary nahita olana manahirana… nahita lahatsoratra marobe avy amin'ny lahatsoratra samihafa izahay momba io lohahevitra io ihany. Avy eo izahay dia nahita lahatsoratra an-taonina izay tsy nalahatra, tsy nisy fifamofoana ary tsy dia nosoratana. Nanana sarotra aza izy ireo ahoana no lahatsoratra izay tsy nisy sary akory.
Tsy nanoro vahaolana avy hatrany izahay. Nanontany azy ireo izahay raha afaka manao programa pilotanay izay ampiharinay ny 20% amin'ny loharanom-baovaon'izy ireo amin'ny fanatsarana sy fampifangaroana atiny misy fa tsy manoratra atiny vaovao.
Ny tanjona dia ny hamaritana a tranomboky atiny - ary avy eo dia manana lahatsoratra iray feno sy feno amin'ny lohahevitra tsirairay. Orinasa nasionaly izy io, ka nandinika ny lohahevitra nifototra tamin'ny mpihaino azy ireo, ny laharam-pikarohany, ny vanim-potoana, ny toerana ary ny mpifaninana aminy. Nanolotra lisitry ny atiny voafaritra izahay, voalahatra isam-bolana, izay natao laharam-pahamehana tamin'ny fikarohana nataonay.
Izy io dia niasa toy ny hatsarana. Ny 20% ny loharanom-pahalalana ampiasainay hananganana tranomboky atiny feno dia nihoatra ny 80% amin'ny atiny hafa novokarina tampoka.
Firy ny atiny hovokarinay isan-kerinandro hahatratrarana ny tanjon'ny famokarana?
Ary nifindra tany:
Iza amin'ireo atiny tokony hatsarantsika ary atambatra manaraka hanatsarana ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny atiny?
Tsy mora izany. Nanangana motera fandinihana angona lehibe mihitsy aza izahay hamantarana ny laharam-pahamehana amin'ny famokarana atiny mba hahazoana antoka fa mahazo ROI tsara indrindra amin'ny loharanom-pahalalana. Ny pejy rehetra dia nosokajiana tamin'ny teny lakile, teny lakile voalahatra, jeografia (raha kendrena), ary taxonomia. Fantatray avy eo ny atiny nilahatra tamin'ny teny mifaninana - saingy tsy nilahatra tsara.
Ny nahavariana, ny mpanoratra sy ny tonian-dahatsoratra koa dia tia azy. Nomena lohahevitra izy ireo, atiny efa misy izay tokony hafindra mankany amin'ny lahatsoratra feno feno, ary koa ny atiny mifaninana amin'ny Internet. Nanolotra azy ireo ny fikarohana rehetra nilain'izy ireo hanoratany lahatsoratra tsara kokoa sy lalina kokoa.
Maninona ianao no tokony hanangana tranomboky atiny
Ity misy horonan-tsary fampidirana fohy momba ny atao hoe tranomboky atiny sy ny antony tokony hampidiran'ny paikadim-barotra momba ny votoatinao ity fomba ity.
Orinasa maro no manangona lahatsoratra amin'ny lohahevitra mitovy amin'izany rehefa mandeha ny fotoana, fa ny mpitsidika ny tranokalanao dia tsy hanindry sy hivezivezy hahita ny vaovao ilain'izy ireo. Ilaina ny manambatra ireo lohahevitra ireo ho lasa tokana sy feno ary voalamina tsara tompony lahatsoratra isaky ny lohahevitra afovoany.
Ahoana ny famaritana ny tranomboky atiny
Ho an'ny vokatrao na serivisinao, ny paikadin'ny votoatinao dia tokony hiditra isaky ny dingana dia ny mpividy:
Famantarana ny olana - fanampiana ny mpanjifa na ny orinasa hahatakatra tsara kokoa ny olana mahazo azy amin'ny ankapobeny ary koa ny fanaintainana aterak'izany aminao, ny ankohonanao, na ny orinasanao.
Fikarohana vahaolana - fanampiana ny mpanjifa na ny orinasa hahatakatra ny fomba hamahana ny olana. Avy amin'ny horonantsary 'how-to' amin'ny alàlan'ny vokatra na serivisy.
Fananganana takiana - fanampiana ny mpanjifa na ny orinasa hahatakatra ny fomba hanombanana tanteraka ny vahaolana tsirairay hahafantarana izay mety indrindra ho azy ireo. Ity dia dingana lehibe ahafahanao manasongadina ny fahasamihafana misy anao.
Safidin'ny mpamatsy - fanampiana ny mpanjifa na ny orinasa hahatakatra ny antony tokony hifidianany anao, ny orinasanao, na ny vokatrao. Eto no tianao hizarana ny fahaizanao, fanamarinana, fanekena ny antoko fahatelo, fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa, sns.
Ho an'ny orinasa dia azonao atao koa ny manampy ilay olona mikaroka hahafantatra ny fomba hanamarinana ny fifaninanana tsirairay avy aminao ary hametraka anao eo alohan'ny ekipany mba hananganana marimaritra iraisana.
fizarana izay noforonina tsara sy mora esorina amin'ny lohateny ambany ka hatramin'ny lohateny.
Research avy amin'ny loharano voalohany sy faharoa mba hanomezana fahatokisana ny atiny.
Lisitra misy bala miaraka amin'ireo hevi-dehibe ao amin'ilay lahatsoratra nohazavaina mazava tsara.
misy sary. Thumbnail solontenan'ny fizarana, kisarisary ary sary na aiza na aiza azo atao mandritra ny lahatsoratra hanazavana azy tsara kokoa sy hananganana fahatakarana. Mbola tsara kokoa aza ny mikrôgrika sy ny sary.
Video sy Audio hanomezana topy maso na famaritana fohy momba ny atiny.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifanay, a teny-isa Tsy ny tanjona faratampony, ireo lahatsoratra ireo dia avy amin'ny teny an-jatony ka hatramin'ny an'arivony vitsivitsy. Ireo lahatsoratra tranainy kokoa, fohy sy mbola tsy novakiana dia naidina ary naterina tamin'ireto lahatsoratra vaovao manankarena ireto.
Backlinko dia nanadihady valiny 1 tapitrisa mahery ary nahita ny pejy laharam-pahamehana # 1 nisy teny 1,890
Ity angon-drakitra ity dia nanohana ny vinavinanay sy ny zavatra hitanay. Niova tanteraka ny fomba fijerinay ny fananganana paikady atiny ho an'ny mpanjifanay. Tsy manao fikarohana sy famokarana lahatsoratra, infografika ary whitepapers intsony izahay. Minia mamolavola a fitehirizam-boky ho an'ny mpanjifanay, araho ny atiny misy ankehitriny, ary ataovy izay laharam-pahamehana ireo banga ilaina.
Na amin'ny Martech Zone, manao an'ity izahay. Nirehareha momba ny fananana lahatsoratra mihoatra ny 10,000 aho taloha. Hainao ve fa? Nanapaka ny bilaogy tamina lahatsoratra 5,000 izahay ary manohy miverina isan-kerinandro ary manankarena ireo lahatsoratra taloha. Satria niova tanteraka izy ireo, dia navoakanay toy ny vaovao. Ho fanampin'izay, satria efa matetika laharana ary manana rohy miverina aminy, dia miakatra amin'ny valin'ny motera fikarohana izy ireo.
Manomboha amin'ny paikadin'ny tranokala atiny
Mba hanombohana dia tiako ny mandray ity fomba ity:
Inona ny vina sy mpanjifa manao fikarohana amin'ny Internet dingana tsirairay amin'ny dian'ny mpividy izany dia hitarika azy ireo hanatona anao na amin'ireo mpifaninana aminao?
Inona mpanao mazia tsy maintsy ampidirinao? Lahatsoratra, sary, takelaka, taratasy fotsy, fandinihana tranga, fijoroana vavolombelona, ​​horonan-tsary, podcast, sns.
Inona amin'izao fotoana izao votoatiny ao amin'ny tranokalanao?
Inona fikarohana azonao atao ve ny mampiditra ao amin'ilay lahatsoratra hanamafisana sy hanananao manokana ny atiny?
Isaky ny dingana sy ny lahatsoratra, inona no ataon'ny motera fikarohana mpifaninana'lahatsoratra toa izany? Ahoana no ahafahanao mamolavola tsara kokoa?
Manoratra momba ianaor orinasa isan-kerinandro dia tsy handeha. Tsy maintsy manoratra momba ny vinavinanao sy ny mpanjifanao ianao. Tsy te ho tonga ny mpitsidika lafo; te hanao fikarohana izy ireo ary mahazo fanampiana. Raha mivarotra sehatra marketing aho dia tsy ny zavatra azontsika atao fotsiny na ny zava-bitan'ny mpanjifanay amin'ny fampiasana ny rindrambaiko. Io no nanovako ny asan'ny mpanjifako sy ny orinasa niasan'izy ireo.
Ny fanampiana ny mpanjifanao sy ny vinavinanao dia izay manosika ny mpihaino anao hahafantatra ny fahaizany sy ny fahefana ao amin'ny orinasa. Ary ny atiny dia mety tsy voafetra amin'ny fomba hanampian'ny vokatrao sy ny serivisinao ny mpanjifanao. Azonao atao mihitsy aza ny mampiditra lahatsoratra momba ny lalàna mifehy, ny asa, ny fampidirana ary ny lohahevitra hafa rehetra izay iadian'ny fanantenanao ny asany.
Ahoana ny fikarohana ny lohahevitra momba ny famakiam-boky
Manomboka amin'ny loharanom-pikarohana telo momba ny atiny novolavolaina foana aho:
Fikarohana organika avy amin'ny Semrush hamantatra ireo lohahevitra sy lahatsoratra be karohina indrindra mifandraika amin'ilay fanantenana andrasana hisarika ahy. Ataovy mora foana koa ny lisitry ny lahatsoratra mitana ny laharana! Te hampitahanao ny lahatsoratrao mba hahazoana antoka fa tsara noho izy ireo ianao.
Fikarohana nizara ara-tsosialy avy amin'ny BuzzSumo. BuzzSumo dia manara-maso hoe isaky ny inona no zaraina ireo lahatsoratra. Raha azonao atao ny mampifangaro ny laza, ny fizarana zahana ary manoratra ny lahatsoratra tsara indrindra momba io lohahevitra io - avo kokoa noho izany ny vintana hamokaranao sy ny fidiram-bolanao. BuzzSumo dia nanoratra lahatsoratra tsara vao haingana momba ny fampiasana azy io Fandinihana atiny.
feno fanadihadiana momba ny hetra hiantohana ny lahatsoratrao dia manarona ireo subtopika rehetra mifandraika amin'ny lohahevitra iray. Zahao hoe Valio ny besinimaro ho an'ny fikarohana mahatalanjona momba ny hetra amin'ny lohahevitra.
Manamboara lisitra goavambe amin'ireto lohahevitra ireto, ataovy lohalaharana ny lanjany, ary manomboka mitady ny tranokalanao. Manana atiny mikasika ny lohahevitra ve ianao? Manana atiny milahatra amin'ny teny lakile mifandraika ve ianao? Raha azo hatsaraina - manorata lahatsoratra iray manankarena sy feno kokoa. Avy eo atsangano ny atiny izay manampy ny vinavinanao sy ny mpanjifanao manaraka.
Amboary amin'ny laharam-pahamehana ny kalandrie votoatinao. Manoro hevitra ny hizara fotoana eo amin'ny fanavaozana ny taloha sy ny fanoratana vaovao aho mandra-pahatapitry ny tranombokinao. Ary misaotra ny fanovana ny tontolon'ny orinasa, ny fandrosoan'ny teknolojia ary ny fifaninanana - misy hatrany ny lohahevitra vaovao manampy ao amin'ny tranombokinao.
Rehefa atambatra ireo lahatsoratra taloha ho lasa lahatsoratra vaovao sy feno kokoa dia aza hadino ny manolo ireo lahatsoratra taloha amin'ny alàlan'ny fanodinana. Matetika aho no mikaroka ny fizotry ny lahatsoratra tsirairay avy eo mampiasa ny permalink laharana tsara indrindra ho an'ilay lahatsoratra vaovao. Rehefa manao an'io aho dia matetika miverina ny motera fikarohana ary avo kokoa noho izany no avoakany. Avy eo, rehefa lasa malaza izy, dia miakatra avo lenta.
Ny zavatra niainanao
Eritrereto ny lahatsoratrao toy ny mpanamory fiaramanidina ho tonga amin'ny fipetrahana. Tsy mifantoka amin'ny tany ny mpanamory… mitady mari-toerana izy, midina, ary mifantoka hatrany hatrany mandra-pikaton'ny fiaramanidina.
Tsy mamaky lahatsoratra iray isaky ny teny ny olona amin'ny voalohany, izy ireo Notarafina izany. Te hampiasa lohateny lehibe ianao, sahy, manasongadina, manakana ny teny nalaina, sary, ary teboka bala. Io dia hahafahan'ny maso mamaky maso avy eo mifantoka. Raha lahatsoratra lava be io dia azonao atao aza ny manomboka azy amin'ny tabilao atiny misy ny vatofantsika izay ahafahan'ny mpampiasa manindry sy mitsambikina amin'ilay faritra mahaliana azy ireo.
Raha te hanana tranomboky tsara indrindra ianao dia tokony hahagaga ny pejinao. Ny lahatsoratra tsirairay sy ny tsirairay dia tokony hanana ny salantsalany ilaina rehetra mba hiantraika tanteraka amin'ny mpitsidika sy hanome azy ireo ny vaovao ilainy. Tokony ho voarindra tsara, matihanina ary manana traikefa miavaka amin'ny mpampiasa raha oharina amin'ireo mpifaninana aminao:
Aza adino ny Antsonao hiasa
Tsy misy ilana azy ny atiny raha tsy hoe misy olona tianao hitarika azy! Aza hadino ny mampahafantatra ny mpamakinao izay manaraka, inona ny hetsika hitanao, ny fomba ahafahany manamboatra fotoana, sns.
Tags: backlinkotranomboky atinyContent Marketingtetik'asa ara-barotra ao amin'ny marketingfamokarana atinylaharana googletokony ho firy ny teny tokony halefan'ny bilaogyfitehirizam-bokyfikarohanasemrushvoatanisa ny teny